ဒေါက်တာ ဗိုက်ကလေး www.drbikalay.com နားလည်မှူ့အပြည့်နဲ့မိသားစု Book
ဂျူန်းဂျူန်း ဂျတ်ဂျတ်…..ရန်ကုန်ကနေ မန်းလေးရထားကြီးဆန်တက်လေပြီ ဇော်ဇော်တစ်ယောက် စာရင်းကိုင် ၁ ဘ၀နဲ့ ရန်ကုန်ကနေ မန်းလေး ကုမ္မဏီ ရုံးခွဲကို ပြောင်းရွေ့ ရတယ်။ ကားလတ်မှတ်မရလို့ ရထားနဲ့ လိုက်ခဲ့ရတယ်။ အထူးတန်းကုန်လို့ ရိုးရိုးတန်းကသာ စီးခဲ့ရတယ် ။
မျတ်နှာချင်းဆိုင်က အဖိုးအဖွားလင်မယား ဘေးနားမှာက ၃၅ နှစ် တောင့်တောင့်ဖြောင့်ဖြောင့် မစန်းနဲ့ အတူ တွဲထိုင်လာရတယ်။မစန်းက အရမ်းဖော်ရွေတယ်၊ ခုမ သိပေမဲ့ အရင်းခြာအသိမိတ်ဆွေလို ပဲ။ စကားပြောရင်လည်း ပေါင်လေးပုတ် ပုခုံးလေးပုတ် ပူးပူးကပ်ကပ် သိပ်ပြောတက်တာ ။ မျတ်နှာချင်းဆိုင် အဖိုးအဖွားကဆို အရွယ်ကွာတဲ့ လင်မယားလို့ ထင်နေကြတာ ။
ဟုတ်တယ်လေ မစန်းက မုန့် တွေ ကျနော်မစားရင် အထင်ခွန့် ကျွေးတာ ။သူယူလာတဲ့ ထမင်းကိုလည်း ၂ယောက်အတူ စားကြတာ။ ညရောက်တော့ မစန်းက အဖွားတို့ ကို ခုံမှာ နေရာပေးပြီး သူနဲ့ ကျနော် အောက်ဆင်းအိပ် ကြတယ်။မစန်းက သူ့ ယူလာတဲ့ အခင်းလေးခင်းပေးတယ် ။
ကျနော်ကတော့ အဖိုးခုံ အောက်ဝင်နေရာယူလိုက်တယ်။မမ စန်းက ကျနော့်ဘေးကပေါ့။ တဖတ်လည့် စောင်းစောင်းလေးကျောပေးနေတယ် ။ ရထားက ယိမ်း သူ တင်ကြီးတွေက ကျနော့်ကို အတင်းလာလာတွန်းတယ် ။ ကျနော့် ငပဲကလည်း ဘာပြောကောင်းမလည်း မတ်လာတာပေါ့ ။ ကျနော်လည်း အတွင်းခံ ဘေးကနေ ထုတ်ပေး မမ စန်း တင်ကြီးတွေကြား ထောက်ပေးထားလိုက်တယ် ။မမ စန်း သိနေတ
ယ် နောက်ကို အတင်းတိုးတိုးကိုလာတာ။ မမ စန်းသတ်ပြင်းတွေချ ။
ခနနေတော့ မမ အိမ်သာ သွားအူးမယ် ဆိုလို့ လိုက်ပို့ ပေးရတယ် ။ လူသွားလမ်းမှာ ကလည်း သိတဲ့အတိုင် အလူကြပ် အိပ်သူကအိပ်။ မမစန်းက ခါးလေးကုန်း လူရှင်းလိုက်။ ရထားအလှူပ်နဲ့ ကျနော်က နောက်က စောင့်လိုက် ။မမ စန်းက ပြန်လှည့်ပြီး တိုးတိုးလေး ” စိတ်ထိန်းနော် မောင်လေး” အိမ်သာထဲ ခနလေး မမ စန်းဝင်ပြီ ပြန်ထွတ်လာတော့ သူလတ်ထဲက သူအတွင်းခံလေး ချွတ်လာပြီး ကျနော့် ပုဆိုးခါးကြား လိပ်ယူ ခိုင်းတယ် ။ နေရာပြန်ရောက်တော့ အဖွားက ကလေးတို့ လင်မယား က အဖွားတို့ ငယ်ငယ်ကအတိုင်းပဲတဲ့ ။မမစန်းက မငြင်းပဲ ရီနေတယ် ။
နေရာလေး ပြန်ယူ အိပ်တယ်။ မမစန်းက သူ့ အထုပ်ထဲက စောလေးယူ ကာ ၂ ယောက်အတူခြူံပြီး ဘေးတစ်စောင်း လှည့်ပေးထားတားတယ်။ကျနော်လည်း နောက်ကနေဖတ် မမစန်းနို့လေးတွေကိုင်ပေးနေတယ်။
မမစန်းက သူ့ ရှပ်အက်ျီအပေါကြယ်သီး ၂လုံးဖြူတ်ပေးတော့ ဘော်လီကြားကနေ နို့ အတွင်းသားထိကိုင်ခြေပေးနေတုန်း မမစန်းက သူ့ ထမီလေးအလိုက်သင့်အောက်လျော့ပေး ကျနော်လည်း ပုဆိုးလေးလျောချ ဘောင်ဘီကို ပေါင်ထိ လျော တောင်နေတဲ့ လီးကြီး မမ စန်း တင်ကြားကြ ပြူနေတဲ့ အဖုတ်ထဲ ထိုးသွင်းလိုက်တယ်။ ရထားအယိမ်း မမစန်းကလည်း အတင်းနောက်ကပ် ။
ခနနေတော့ ကျနော့်သုတ်ရည်တွေ မမစန်း အဖုတ်ထဲ ထိုးထည့်လိုက်ပြီလေ။မမစန်း အသာမပြေနိုင်။တိုးတိုးလေး
“မောင်လေး လီးမထုတ်နဲ့ အူး ထိုးထည့်ထား”
“တစ်ခါမ မလိုးဘူး ဘူးလား”
“ဟင့်အင် ခုစလိုးတာ အားလည်းမရ လီးလည်းနာတယ် မမ”
“ခ်ခ်” “မမက အပျိူကြီးလား ကြပ်လိုက်တာ”
“အင်းပေါ့ မမလည်း မင့်လီးတောင့်
ကျနော် လီးလေးက တဖြေးဖြေး မမစန်းအဖုတ်ထဲက
သူ့ အလိုလိုပြန်ထွက်လာ ပြီ ။
မမစန်းက ကျနော်ဘက်လှည့်လာပြီး သူ့ နို့ တွေ စို့ ခိုင်း ကျနော်လီးလေး စွပေးနေတယ်။ခနနေ လီးလေး ပြန်တောင်လာတော့ မမစန်း ပြန်လှည့် ကျနော်လီးလေးကိုင် သူ့ စောက်ဖုတ်ထဲ ထိုးထည့်ပြီး
နောက်ကို အတင်းကပ်ကပ်လာ ရထားက ယိမ်း ကျနော်လည်း အားမရ ဖြစ်သလိုစောင့်လိုးရ ခုံနဲ့ စောင်မိလို့ လည်း နာပေါ့။ ဒုတိယချီဆိုတော့ နည်းနည်းကြာတော့
မမစန်းစောက်ဖုတ်ထဲကလည်း အရည်တွေ အများကြီးထွက် ကျနော်လည်းထွက် ပြှိူင်တူပြီး ဖတ်အိပ်လိုက်တယ် ။
အရမ်းအိပ်ပျော်သွားတာ ။ မိုးလင်းတော့ မမစန်းက တောင် နှိူးယူရတယ် ။မန်းလေးရောက်တော့ မမ စန်းက သူ့ အိမ်ခေါ်သွားတယ် ။ကြတ်ဥ၂လုံးယူလာပြီး ဖောက်တိုက်။ သူ့ အခန်းထဲ ခေါ် ကျနော့်လီးကို စုပ်တော့တာပဲ။
သိတဲ့အတိုင်းပေါ့ လီးက ချတ်ခြင်းတောင် မမစန်း ကုန်းခိုင်းပြီး
အင့် အင့် အင့် အာ့ အာ့
“မောင်လေးက ခုကြ အလိုးကောင်းတယ်
ကျနော်လည်း အောကားတွေ ကြည့်ဘူးတော့
ထောင်ပြီး စောင့်စောင့်လိုး အင့် အင့် အာ့
မမစန်းကိုအပေါ်က နေစောင့်ခိုင်း မမစန်းက
အပေါ်ကနေ ကုန်းစောင့် သူ့ နို့ တွေ ချေကျနော်လည်း အောက်ကကော့စောင့်
အာ့ အာ့ မမစန်းအရည်တွေထွက်
ကုန်းကုန်းလေး ကျနော့်ပေါ် မှောက်ချလိုက်တယ်။
မမစန်း နုတ်ခမ်းလေးစုပ်ပေးပြီး လိမ့်ချကာ ပေါင်လေး
၂လုံးထောင် စောင့်စောင့်လိုး အာ့ ကောင့်လိုက်တာ
မောင်လေးရယ် အရည်တွေနဲ့ 
ဗြွတ် ဗြွတ် ဗြွတ် အာ့. အာ့.
အာ့ ကျနော် သုတ်ထွက်ခါနီး
အရမ်း ကြမ်းတယ် မမ မခွဲနိုင်တော့ဘူး။
နေလည် ၂ နာရီလော၇် ကုမ္မဏီ အဆောင် ရောက် ကုမ္မဏီရုံးခန်းသတင်းပို့ မန်နေဂျာ ဦးထွန်းမြင့်က အရမ်းဖော်ရွေတယ် ။ ခရီးပန်းလာတော့ နားခိုင်းတယ်လေ ။
ညနေရုံးဆင်း ၄ နာရီလောက် ဦးထွန်းမြင့် အဆောင်ရောက်လာတယ်။ “အသစ်လေး ညီ လေး ဇော်ဇော်” “အကို့ ကို မပြူစုချင်ဘူးလား”အင်းစကားခေါ်လာတော့လည်း လိုက်ပြူစုရတော့မယ့် ပေါ့ “ဟုတ်ကိုကြီး ကြိုက်တဲ့ ဘီယာဆိုင်သွား” ဘဲကြီးက အလိုမဟုတ် သူ့ သွားနေကြ ဘီအီးဆိုင် ကိုယ်က မသောက်တက် တစ်ယောက်ထဲ တစ်လုံးခွဲ ချလိုက်တယ် ။
သူ့ မိန်းမ အလှပြင်ကြောင်း သူ့ ကိုကြဂရုမစိုက် သူ့ အလှပဲ ပြင်ကြောင်း ဒါ့ကြောင့် သူ နေ့ တိုင်း အမူးသောက်ကြောင်း သာလိကာနဲ့ ဇရက် ပေါင်ဆက်ထားသလို ပြောတော့တာပဲ ။ လူမှန်းမသိတော့လို့ သူ့ အိမ်လိုက်ပို့ တာ ကျနော်ရောက်ဖူးခဲ့တဲ့ မမစန်းအိမ်
“သေနာကြီး မူးလာပြန်ပြီ ဧည့်သည်ပါလို့ ကျူပ်ငြိမ်နေလိုက်မယ်”
“အေ့ ….ဟုတ်တယ် ငါ့ညီလေး အသစ်ငါ့ရုံးက
ဒီနေ့ မှ ရန်ကုန်က ပြောင်းလာတာ”
“ညီလေး ဒီမှာ ထမင်းစား ညအိပ် မနက် ကိုကြီးနဲ့အတူ ရုံးသွားမယ်”
” ရပါတယ် ကိုကြီးရယ် အဆောင်ပြနအိပ်ပါ့မယ်”
” နိုးနိုး ဒီမှာ အိပ် ညီ”
” မိစန်း သွား ထမင်းချတ် ဟင်းကောင်းပစေ ”
ညီလေး အကိုနည်းနည်း ယူလိုက်အူးမယ် “ဟန်ဆောင်ရပေမဲ့ မမစန်းကို ထိတွေ့ ချင်သေးတယ် ။ဘဲကြီးက မူးပြီး သူ့ အိပ်ယာပေါ် မှောက်နေပြီ ။ မမ စန်း မီးဖိုးချောင်ထဲ လိုက်သွားပြီး ” မင်း ကံကောင်းတယ် မမ မင်းကို လွမ်းပြီး ပြန်တွေ့ ချင်တယ် မင်းပြန်လာပါစေ ဆုတောင်းနေတာ ။
”မမ လိမ်တယ် အပျိူကြီးမဟုတ်ပဲနဲ့ ”
“ခ်ခ် မင်းလေးက တကယ့်မလိုးဘူးတဲ့ အရိုင်းလေး”
“သေနာကြီး မှောက်နေပြီ ” လာမောင်လေး ဟိုဘတ်အခန်းထဲ ကို”
မမစန်းက အိပ်ယာခင်းဖို့ ကုန်းနေတုန်း
ထမီလှန်ပြီး မမစန်း အဖုတ်ထဲ့ စောင့်ထည့်လိုက်တယ့်။
“အမလေး လူဆိုးလေး ကြမ်းထျာ”
မမစန်း ခုတင်ပေါ်အလိုက်သင့် မှောက်ချကုန်းလိုက်တယ်။
အင့် အာ့ မောင်လေး၇ယ် ကောင်းလိုက်တာ
အင့် အင့် မမစန်းလည်း အရည်တွေထွက်
ဗြွတ် ဗြွတ် အို မောင်လေး ရယ်
ကုန်းလိုးနေလိုက်တယ်ကျနော်ထွတ်ခါနီး စောင့်လိုးကာ ၂ဦးအတူ
” မ၀လေသော ရမ္မတ် ချို ” *******************
ကျနော့်လီးလေး အာသာပြေ တော့ မမစန်း အဖုတ်ထဲကနေ ပြန်ထွတ်လာပြီ ။ မမစန်း ထမင်းဟင်းချတ် ကျနော် ကတော့ TV ကြည့်နေလိုက်တယ် ည ၈ နာရီလောက် ဦးထွန်းမြင့် အမူးပြေ လာတော့ ထမင်းထစားတော့တယ် ။
“ဟာ မိန်းမ ကျွေးနှင့်တာမဟုတ်ဘူးကွာ ကဲ ခူး စားကြမယ် ”
၃ ယောက်သား ထမင်းအတူစားပြီး ဧည့်ခန်းမှာ
အလ္လာပ သလ္လာပ စကားတွေ ပြောကြပြီးမမစန်းက သူယောက်ျားနဲ့
ကျနော့်အတွက် လိမ္မော်ရည် ၂ခွတ် လာချပေးတယ်။
အတူလိမ္မော်ရည်သောက် ပြီး ခနနေတော့ ဦးထွန်းမြင့် အိပ်ယာထဲ ၀င်သွားပြီ ။ “ညီလေး အကို အိပ်တော့မယ် အမူးမပြေ သေးဘူးကွ ။
မနက်ရုံးမတက်နိုင်ပဲ နေအူးမယ် ”
“ဟုတ်ကိုကြီး ကျနော်လည်း အိပ်မယ်”
“ယောက်ျား ကျုပ် ကိုရီးယားကား ကြည့်လိုက်အူးမယ် ”
“အေးပါ မိန်းမရယ် မင်းတို့ မိန်းမတိုင်က ကိုရီးယားမှ ကိုရီးယားတွေ ကြည့်ကြည့်
“ကိုးရီးယားက အပိုင်းဆက် စွဲတယ် ကိုကြီးရ”
ကျနော်လည်း ကစားဖောရှော လိုက်ပြောပေးလိုက်တယ် ။
ဦးထွန်းမြင့် အိပ်ယာထဲ ၀င်သွားတော့ မမစန်းပါ လိုက်သွားတယ်။
ကျနော်ခန တီဗွီကြည့်နေလိုက်တယ် ။ တအောင့် နေတော့ မမ စန်း ပြန်ထွတ်လာတယ် ။
ရင်သားနှစ်မွှာ မြင်ရတဲ့ ပါးလွာတဲ့ ည၀တ် အင်္ကျီလေးနဲ့ ဘော်လီကမပါ ။ ရင်နှမွှာ တောင့်တင်းလို့ နို့ ၂လုံးရဲ့ ဖြူဖွေး အိစက်စက်က ကျနော့် လီးကို တန်းမတ်စေ တယ် ။မမစန်းကကျနော့်နား တန်းကပ်လာပြီး လီးလေးကို လာကိုင်တယ်။
“ဟင့် ကောင်စုတ်လေး ၀တယ်မရှိဘူးနော်
“မမ ဒီည မသင့်တော်လောက်ဘူး ကိုကြီး နိုးလာပါ့မယ်”
“ဟိ အိပ်ဆေးအစွမ်းပြနေပါပြီကွာ ”
“ဗျာ ” “လာ အခန်းထဲ သွားမယ် ”
မမစန်း ကိုယ်လုံးလေး ပွေ့ဖတ်အခန်းထဲ ၀င်သွားခဲ့တယ်။
ခုထင်ပေါ် မမစန်းကို လှဲ ထမီလေးချွတ် လိုးရှင်းလူးလာတဲ့
မမစန်း စောက်ဖုတ်ကြီးကို သေချာဖြဲ လျှာလေးနဲ့ ယတ် ကလိပေးလိုက်တော့တယ် ။
“အို မောင်လေးရယ် အား.”
စောက်စိလေး ပြူးထွတ်နေတာကို စုပ်ပေးလိုက်တယ်
ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ်
“အမလေးလေး မောင်းလေးရယ် လုပ်တက်လိုက်တာ အား ”
“မမ အရည်တွေ ထွတ်တော့မယ် မောင်လေး ခန ဖယ်ပေးအူး ”
မမစန်းက သူ့ စောက်ဖုတ်ထဲက ထွတ်လာတဲ့အရည်တွေကို
သူ့ လတ်ခုပ်နဲ့ ခံပြီး အပြင်ထွက်သွားတယ်။
ကျနော့်မှာ တောင်နေတဲ့ လီးကို ကိုင်ထားပြီး အိပ်ယာပေါ်
ပတ်လတ်လှန်ကျန်ရစ်နေခဲ့တယ် ။နားမလည် နိုင်စွာနဲ့ပေါ ။
မမစန်း ပြန်ရောက်လာတော့ ကျနော့်လီးလေးကို စုပ်ပေး တော့တာပဲ။
လီးပေါ်က အေ၇ပြာလေး ထွန်း လီးထစ် လေးကို လျာလေးနဲ့ ယတ်။
” အို မမ ရယ် ကောင်းလိုက်တာ ” မမစန်းက သူပါးစပ်ကြီးနဲ့
ကုန်းကုန်းစုပ် ပေးတယ် ။ “ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ” “အား မမရယ် တက်စောင့်ပါတော့ “မမစန်းက ကျနော် ပေါ်ကနေ လီးလေးကိုင် သူ့ စောက်ဖုတ်ကြီးထဲ တေ့ပြီး ထိုင်ချလိုက်တယ် ။ ဟော ဖင်လေးမြှောက် ပြန်ထုက်လိုက် ထိုင်ချလိုက် ။ “မမ ရယ် မြန်မြန်လေးစောင့် ” စောက်ဖုတ်က အရည်တွေ ထွက်နေတာဆို တော့ “ဗြွတ် ဗြွတ် ဗြွတ်” မမစန်း မှာ ကိုယ်လေး ညွတ် ကျနေိာပေါ် ကိုင်းကျလာတယ် ။ နို့ လေးကိုင်ချေ ပါးစပ်ခြင်း စုပ် ။ မမစန်းကတော့ တင်လေး မြောက်ပြီး ဖြေးဖြေးချင်း စောင့်ပေးတယ်။ဗြွတ် ဗြွတ် မမစန်းကို ပတ်လတ်လှန်ခိုင်းပြီး ဒူးလေးထောင် သူ့ ဖောက်ဖုတ်အ၀ကနေ
ကျနော့်လီးလေး စောင့်ထိုး ” အင့် ဗြွတ် ”
“အာ့ မောင်း ဖြေးဖြေးစောင့်ပါ ”
“ဟုတ် မမ” လီးလေး အပြင်ထုတ်
စောက်ဖုတ် အ၀ကနေ ဖြေးဖြေးလေး လီးအဆုံးထိ သွင်း…
” အင်းးး “အား အမလေးလေး ကောင်းလိုက်တာ မမ.
အသားအိမ် ထိထိ သွားတယ် ”
“အင်းး” “အား ကောင်းလိုက်မောင်လေးရယ်”
” စောင့် စောင့် လိုးတော့”
“အင့် အင့် အင့် ” “ဗြွတ် ဗြွတ် ဗြွတ်”
“အို့အမလေးလေး မြန်မြန်စောင့်လိုးပါတေါ့”
“အင့် ” သုတ်တွေထွတ်ခါနီး အသားကုန် စောင့်ချ လိုက်တာ
“အင့် ” “အမလေး ”
ကျနော် မမစန်းပေါ် မှောက်ချလိုက်ပြီး နုတ်ခမ်းစုပ်ပေး မမစန်းက ကျနော်ကို တင်းကြပ်နေအောင် ဖတ်ထားတယ်။
“မောင်လေး မမလေ ညတိုင်း မောင်လေးနဲ့ ခံချင်တယ်”
“ခြေနေရပေါ့ မမရယ် မောင်လေးလည်း မမကို ညတိုင်း လိုးပေးချင်တယ်”
“မောင်လေး မိန်းမ ရရင် မမကို မေ့မှာပါ”
“အင်းဟုတ်တယ် ခိုးလိုးရတာ ပိုအရသာ ရှိတယ်နော် မောင်လေး”
” ဟုတ်တယ် မမရဲ့”
“မမ ခုနက အရည်တွေ ဘာလုပ်တာလည်း
“ဟို လူကြီး ဟာပေါ် သွားထား သူ့ ပုဆိုး ရွဲအောင် လုပ်ခဲ့တာပေါ့”
“အော် ဥာဏ်ကောင်းပါဘိ မမရယ် ”
“မမ ကြက်ဥနဲ့ စပါကလင် သွားယူအူးမယ်”
ဟုတ် ချစ်မ၀တဲ့ မောင့်မမ ပြွတ်”
မမ ယူလာတဲ့ ကြတ်ဥစပါကလင်သောက် ပတ်လတ်လေး လှန်နေ ။
မမ က ကျနော်ကို ဖတ်ထားတယ်။ ကိုယ်တုံးလုံး နို့လေးတွေက လာလာပွတ် ။ မမ အဖုတ်လေး ကို လတ်ညှိး လတ်ခလယ် လတ်သန်းကြွယ် ၃ချောင်းနဲ့ နှိုက် ကလိ ။ မမ မှာ တွန့် တွန့်တက်လာတယ် ။
ကျနော် လီးလေးကို မမ က ဂွင်းထု ပေး နေတယ် ။ ကြတ်ဥစပါကလင် အစွမ်းက လီးလေး တောင်လာပြီး မမက ကုန်းစုပ်တေါ့ တာပဲ ။
“ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ”
69 ပုံစံပြောင်း မမက ကျနော့်လီးလေးစုပ်
ကျနော်က မမ စောက်ဖုတ်လေး လတ်နဲ့ ထိုးလိုက်
မမ အရည် ထွက်ခါနီးတော့
ဆင်းသွားပြီး ခါး လေးညွတ် ကုန်းပေးထားပြီး လိုးခိုင်းတော့တာပဲ
၊ မမ တင်ကါးကါးကြီးကြားက
စောက်ဖုတ်လေး ပြူထွတ် ကျနော့် မာတောင်ထန်နေတဲ့'
လီးကြီး စောင့်စောင့်လိုးထည့်ပစ်လိုက်တယ် ။
“အင့် ” “အမလေး” “အင့် ”
“အာ့ ” စောက်ရည်တွေက ရွဲရွဲကျလာ စောင့်စောင့် လိုး လို့ ကကောင်း ”
“ဗွတ် ဗြွတ် ဗြွတ်” “အမလေး ကောင်းတယ် မောင်ရယ်”
“ဗြွတ် ဗြွတ် ဗြွတ်” “အာ့ အာ့”
မမက ကုန်းရာကနေ ညောင်းလာလို့ ညွတ်ကျသွားပြီး ဘေးစောင်းလေး
နေပေး ကျနော်လည်း ပေါင်လေး တစ်ဖတ်မြောက် လိုးပေးလိုက်တယ်။
“အင့် အင့် အင့် ”
“အို့အမလေး အာ့ အာ့” အင့် “အာ့ လိုးတက်လိုက်တာ မောင်ရယ်”
မမကို ပတ်လတ်လှန်ခိုင်းပြီး ခြေ၂ချောင်ထောင် စုကိုင်ပြီး လိုးထည့်
“အင့် အင့်” “အာ့ အမလေး ကောင်းလည်း ကေါင်းတယ်
မောင်ရယ် စောက်ဖုတ်နာတယ်” “မောင့် လီးမနာဘူးလား ”
“ကျပ်မှာပေါ့ စုကိုင်ထားတာကိုး ဗြဲပြီး အားရပါးရ လိုးလိုက်စမ်းပါ မောင်ရယ်”
မမ ပေါင်၂လုံး ကားပြီး အားရပါးရ စောင့် စောင့်လိုး ထည့်
“အာ့ ကောင်းလိုက်တာ အမလေး”
“ဗွတ် ဗြွတ် ဗြွတ်”
“အာ့ အာ့ အာ့ ”
“မောင်လေး ပြီးအောင် စိတ်ကြိုက် စောင့်လိုးတော့ ”
“ဗွတ် ဗြွတ် ဗြွတ်”ဗွတ် ဗြွတ် ဗြွတ်”
” အာ့ အမလေး အာ့ အာ့ အားးး”
“အင့် “အား “”အမလေး မောင်လေးရယ်
စောက်ဖုတ်လည်း နာပြီးကျိန်နေပြီ အိပ်ကြရအောင်နော်
“မင်းလည်း ပင်ပန်းနေပြီ” “ဟုတ် မမ “ကျနော်နဲ့ တူတူ အိပ်မှာလား
“မမ ပင်ပန်းနေပြီ မနက်မနိုးလောက်ဘူး.ဟိုလူကြီး နားသွားအိပ်တော့မယ် ။
မမ. မနက်မနိုးရင် ဟိုလူကြီး သိသွားပေါ့””ဟုတ် မမ”
” အချစ်ကြီးသူ၏ မေတ္တာ” *******************
စာဖတ်သူတို့ ရင်ထဲ ဟာခနဲ ဟင်ကနဲ ဖြစ်သွားမဲ့ ဇာတ်သိမ်းပိုင်းလေးပါ။
မနက်မိုးလင်းတော့ ထမင်းကြော်စား ကာဖယ်သောက်ပြီး အကိုကြီးနဲ့အတူ ရုံးသွားခဲ့တယ်။ ညနေ စောစောလေး ရုံးက ပြန်လာပြီး အိမ်ရှေ့မင်း ထန်းတောတက်သွားပြီး ထန်းရေသောက် ကြတယ်။
ကိုကြီးပဲ ခေါ်တာပါ ။ ထန်းတောထဲ သီးသန့် နေရာမှာ ထိုင် ထန်းရေ တစ်မြူ မှာလိုက်တယ် ။ ကိုကြီးက မထင်မှတ်ပဲ စကာတွေ ရင်ဖွင့်လာတယ် ကျနော် အရမ်းအံ့သြ မိတယ် ။
“မနေ့ ညက မင်းနဲ့ကိုယ့်မိန်းမ ”
“ဗျာ” ကျနော် အံ့သြ တာထက် တုန်လှုပ် ခြောက်ခြား လိပ်ပြာမလုံ '
ဓားခံရတော့မလား ဗိုက်တွေတောင် ယားလာတယ်။
“မအံ့သြပါနဲ့ ညီလေး ..အကိုခွင့်လွတ်တယ်”
“ဒါပေမဲ့ မင်းကတိတစ်ခုပေးရမယ်..ငါ့မိန်းမ မင်းမမ ပေါ့ကွာ
သူကို ကိုယ်ဝန်ယူအောင် မင်းပြောပေးရမယ် ”
“အကိုတို့ လင်မယား အစက သိပ်ချစ်တာ
စီးပွားရေးအရင်စု ကလေးနောက်မ ယူမယ်ပေါ့ကွာ”
“လွန်ခဲ့တဲ့6လ လောက်က အကို့ ပန်းလုံးဝ သေသွားခဲ့”
“ဗျာ ကိုကြီး မကုဘူးလား” “ကိုယ့်မိန်းမနဲ့မဆက်ဆံတာ ၁နှစ်ကျော်ပြီ”
“အစက သူကို့ ကလိ ခနပဲတောင်လာ
မလုပ်ဖြစ် ပန်ပြီး သေသေသွား”
“သူ့ လည်းမပြော ကျိတ်ကုရင်း လွန်ခဲ့တဲ့ 6လလောက်က လုံးဝသေသွားတာ”
” ဒါလည်း အကိုအပစ်တွေပါ ။
အကိုက အလုပ်ကြိုးစား ငယ်ငယ်နဲ့ မန်နေဂျာဖြစ်
ရန်ကုန်မှာ သိတဲ့အတိုင်း ကလပ်သွား ရုံးက
တပည့်လေးတွေစည်းရုံး ကြာဆေး ကြီးဆေး
ဖီးဆေး အကုန်သောက်လုပ်ခဲ့တဲ့ ဒဏ်တွေပေါ့ကွာ”
”ဒါနဲ့ မနေ့ ညက မမနဲ့ကျနော့်ကို ဘယ်လို သိတာလည်း ကိုကြီး”
“အကို အရက်သောက်ရင် ဘယ်တော့မှ မမူးဘူး ၊ ပန်းသေ လို့ မိန်းမကို မဆက်ဆံ နိုင်ချိန်ကစ သောက်တယ် အရက်မူးချင်ယောင်ဆောင်တယ် မိန်းမ နောက်မီးလင်းလား သိချင်လို့ မူးချင်ယောင်ဆောင်တာ ။”
“တနှစ်အတွင်း မိန်းမလည်း နောက်မီး မလင်း ပါဘူး”
“မူးလို့ အိမ်ကို ဘယ်ဧည့်သည်ခေါ်လာလာ သူ့ မကြိုက်ဘူး ပွဲကြမ်းတယ် ”
“ဧည့်သည်လည်း လန့် ပြေး”
“မင်းကို ခေါ်လာတော့ သူဘာမှမပြောတာ သတိထားမိတယ်”ထမင်းချတ်ခိုင်းတော့ မငြင်းဘူး””အရင်ကဆို အပြင်မှာကျွေးပါလား ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ်ပြောတာ”
“အကို အရက်ဘယ်တော့မှမမူးတဲ့သူ မနေ့ ညက ထမင်းစား လိမ္မော်ရည်သောက်ပြီး အိပ်တာ မိုးတလင်း” “မိုးလင်း အကို နိုးတော့ အကို့ ပုဆိုးနဲ့ ငယ်ပါမှာ အရည်ရွဲနေတယ် ”
“မင်းအခန်းထဲဝင်တော့ ငါ့မိန်းမ ခေါင်းစည်း ကြိုးရယ် အောက်ခံဘောင်းဘီ တွေ့တယ်”
မင်းမမကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖို့ မင်းသေချာပြောပြ
တာဝန်ယူပေး အကို အကုန်ခွင့်လွတ်ပါတယ်”
ကျနော်နဲ့ကိုကြီး လည်း ထန်းရည်သောက်
လေလေးတစ်ဖြူးဖြူး ခေါင်းလေးက ရီဝေ ရီဝေ လမ်းလေးလျောက်ပြန်လာခဲု့ကတယ် လမ်းမှာ စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုဝင် ဒန်ပေါက်၃ ထုပ် အကိုကြီးဝင်ဝယ်ပြီး
“ရှင်တို့မူးလာကြပြီလား နှစ်ယောက်လုံး”
“ထန်းရည်လေး နည်းနည်းတိုက်တာပါ ဘာမှဖြစ်ဘူး
မိန်းမ ရော့ ဒန်ပေါက် စားကြမယ် ပြင်တော့”
ထမင်းဝိုင်းမှာ အတူစားကြပြီး အရက်တစ်လုံး ၀ယ်လာကါ ထပ်သောက်နေတယ် “
”ကလေးကို ထပ်မတိုက်နဲ့တော့ ”
“စိတ်ချပါ လုံးဝမတိုက်ဘူး ”
' မမစန်းက မသောက်တော့နဲ့မပြောပဲ ကျနော်ကို
မတိုက်ဖို့ သာပြောတယ်။ ကိုကြီးကတော့ မထေ့တထေ့ စကားလုံးတွေ ပြောတော့ ကျနော်အနေရခတ်လာတယ်။ ခွတ်ကြမ်းချ ခနနဲ့ တစ်လုံးကုန် မူးလာပြီး ထသွားတဲ့ နောက်ဆုံးစကားလေးက ကဗျာဆန်သွားတယ်။ တိကျတဲ့ဒီည ငါ့ဘ၀ရဲ့ အဖြစ်မှန် တစ်ကို တည်းပဲ အိပ်စက်ရန် စိတ်အမှန်ကျိတ်ခံလို့နိဗ္ဗာန်သို့ မူးစေသတည်း” မမစန်းကတော့ “ဒီအမူးပေါက်ကရလျောက် ပြောပြီး အိပ်တော့မယ် ”
“မင်းလည်း ရေချိုးတော့ မသောက်တက်ပဲ လျောက်သောက်” “နေအူး ထမင်းစားပြီး တန်းမချိုးနဲ့ ခနနေအူး” မမစန်းကတော့ ပန်းကန်တွေဆေး ကျနော်က TVဖွင့်ကြည့်နေလိုက်တယ် ။ မမစန်း ပန်းကန်ဆေးပြီး ကျနော့်ကို ရေချိုးခိုင်းတယ်။ “မောင်လေး ရေချိုးတော့ ”
“ဟုတ် ” ကျနော်လည်း ရေချိုးခန်းဝင် ရေချိုး လေးငါးဆယ်ခွက်လောင် ဆပ်ပြာတိုက်နေတုန်း မမစန်းက တံခါးလာခေါက် ဖွင့်ခိုင်းတယ် ။
ကျနော်လည်း ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်။ မမစန်း က ထမီရေလျားနဲ့ ရေအတူတူချိုးမယ်တဲ့၊ ကျနော့်ကို အတင်းဖတ် နှုတ်ခမ်းတွေ စုပ်တော့တာပဲ။
ကျနော်လည်း မမစန်းထမီကို ချွတ်နို့အုံတွေ ကိုခြေ နို့သီးလေးလေးခြေခြေပေး တစ်ဖတ်က မမစန်းစောင်ဖုတ်ကြားလေး မြောင်းထဲ အပေါ်အောက်ဆွဲပွတ်ပေး မမစန်း ကလည်း ကျနော်လီးကို ဂွင်းထုပေး လီးက တင်းတောင်လာတော့ မမစန်းက သူ့စောက်ဖုတ်ထဲတေ့ ကာ ကျနော်ကို အတင်း ဖတ်ထားတယ်။ ကျနော်လည်း မမ ကို နံရံကပ် ခြေတစ်ဖတ် ပေါင်ကနေမြှောက် ကိုင် လိုးပေးလိုက်တယ်
“အာ့ ကောင်းလိုက်တာမောင်ရယ် အလို ပထမဆုံ ခံဘူးတာ တစ်မျိုးလေးပဲ”
နှစ်ယောက်သား ထိုင်ချလိုက်ပြီး မမစန်းက စောင့်ပေးတယ်
အဖုတ်က အရည်တွေ ထွက်
မမစန်းကလည်း အရမ်းစောင့်”ဗွတ် ဗွတ် ဗွတ်”
“အား မမရယ် ကောင်းလိုက်တာ”
“မောင်လေးရယ် ပြီးသေးဘူးလား ”
ဗွတ် ဗွတ် ဗွတ်” “အာ့ အူး မမ ရယ်”
“မမ ရေကန်ပေါ် လတ်ထောက်ကုန်းလိုက်”
“အင်း ” မမစန်း တင်ပါးကြီးကြီး ကြီးတွေကိုင် စောင့် စောင့် လိုး“အင့် ဗွတ် အင့် ဗွတ် အင့်” “အ့မလေး မောင်နော် ခုနောက်ပိုင်း အစောင့်ကြမ်းတယ် ”
“အင့် ဗွတ် အင့် ဗွတ် အင့်”
“အ့ အ့ အ့”ပြီးခါနီး မမစန်းခါးဖတ်ပြီး အဆုံးထိစောင့်လိုးလိုက်တယ်။
“မမ ခန စိမ်ထားမယ်” “မောင့်သဘော…အအေးပတ်အူးမယ်”
“အင်းပါ ” အတူ ရေချိုး သူ့ ကိုယ်ပွတ်ဆပ်ပြာတိုက် ကိုယ့်သူပွတ် ဆက်ပြာတိုက်
ဖီးက တက်ပြီးရင်းတက်နေတော့ တာပဲ။”ဟွန့် တော်ဦးမောင် . အအေးပတ်မယ်” ရေချိုးပြီး မမက သေချာကို တဘက်နဲ့ရေစင်အောင် သုတ်ပေးတယ် ။
အခန်းထဲအေးဆေး နား ။ မမစန်းကလည်း သနပ်ခါးလေးလူး မထီရေလျားနေနဲ့ လိုးရှင် လူး ပေးဖို့ ကျနော် အခန်းထဲလာ ။ ကြတ်ဥ၂လုံးပါယူလာပေးတယ်။ ကျနော်လည်း မမစန်းကို စိတ်တိုင်းကြပွတ် လိမ်းပေးနေလိုက်တယ် ။
“ခန နားအူးမယ်လေ ရော့ေ
မာင်ကြတ်ဥသောက်နှင့်မမ အင်္ကျီသွား ၀တ်အူးမယ်”
“ဟုတ် ” မမ အင်္ကျီဝတ်ပြီးပြန်လာပြီ။ဘော်လီတောင်မပါဘူး။ ပတ်လတ်လှန်နေတဲ့ ကျနော့်ကို အတင်းဖတ် နို့ ၂လုံးနဲ့ ပါးစပ်လာထိုးပေး စနေတယ် ။
ကျနော်လည်း မမအင်္ကျီမချွတ် နို့ လေးကိုင် စို့ ။
မမ ကို အတင်းဖတ် ဘေးတစောင်း မျတ်နှာဆိုင် ဖတ် နှုတ်ခမ်းလေးစုပ် မမကို နားချရတော့မယ်ပေါ့ ။
“မမ. ..” “ပြောလေ. မောင်”
“မမ တားဆေးထိုးထားတာလား ဆေးစား တာလား”
“ဟိုနေက ဆေးစားထားတယ် ဘာဖြစ်လို့လည်း”
“မစားပါနဲ့တော့ မမ ။ မမ ခလေးယူလေ”
“ဘယ်ဖြစ်ပါ့မလည်း ဟိုလူကြီး သိသွားမှာပေါ့”
“ကိုကြီးက သိတယ် မမရဲ့..ညနေက ကျနော့် အကုန်ပြောပြတယ်”
“မမနဲ့သူ မဆက်ဆံတာ ၁နှစ်ကျော်ပြီ ”
“ဟုတ်တယ် မမရဲ့၊ မမဆန္ဒကို သူလုံးဝ မဖြည့်ဆည်း
ပေးနိုင်တော့တဲ့ အချိန် လွန်ခဲ့ တဲ့6လလောက်က စပြီး
သူ အရက်ကို နေတိုင်း သောက်လာခဲ့တယ် ”
“အေး အတာဟုတ်တယ် ”
“တကယ်တော့ သူ မမူးပါဘူး မမ ကို အကဲ ခတ်တဲ့စောင့်ကြည့်ရုံ
”မမလည်း သူပေါ်သစ္စာရှိတယ် လို့ ပြောတယ်”
“ဒါပေမဲ့ ကျနော်နဲ့ကြ မမက စိတ်ပါသွားတယ်တဲ့”
”အ့ ရထားပေါ်မှာလေ ရှင်လေးက
လူကို လာထောက်တာကိုး””ခ်ခ် ”
မိန်းမ အထောက်ခံရတော့ ဆာလာတာပေါ့. ”
“ပြီး ရှင်လေးက အပျို အအို မခွဲတက်တဲ့
“မမ အဆို ကလေးယူပေးလိုက်ပါနော် .၊
ကိုကြီးနဲ့မမ အရင်က ကလေးအရမ်းလိုချင် ကြတာတဲ့
စီးပွားရေးကြောင့် မယူဖြစ်ကြတာဆို “
”အင်း ဟုတ်တယ် “၊မမ ပေးပါအူးမယ် မေါင် ကရော
မောင့်ကလေးကို အဖေဆိုတဲ့ ခေါ်ပိုင်ခွင့်
မလိုချင်ဘူးလား ၊မမ နောက်ပိုင်းမှ
“မမရယ် မမတို့ ဘ၀ ပျော်ရွှင်ပိုင်ဆိုင်ရင် ကျနော် ဘယ်လိုနေရနေရ နေနိုင်ရမှာပေါ့”
“ကိုကြီး ပူပန်နေတာက မမ အခြားတစ်ယောက်နဲ့ နေပြီး သူ့ ကိုခွဲသွားမှာ စိုးရိမ်နေတယ် ”
“သူကပြောတယ် မမ ၊မမကိုယ်ဝန်ရတဲ့နေကစ
“သူသားသမီးအရင်း မဟုတ်မှန်း ကျနော်တို့ ၃ ယောက်ပဲသိတာ”
နောက် မမက မိခင်ဘ၀ နဲ့ တည်ငြိမ်ပြီး သာယာတဲ့ဘ၀ကို သူလိုချင်တယ်တဲ့”
“အင်းလေ သူတောင် စိတ်ထားကြီးတာပဲ မမ ကလေးယူပေးပါ့မယ်”
“မင်းလေးကလည်း ပြီးခါနီး သုတ်ကို စောင့်စောင့်ထည့်နေတာ ၊
ဆေးစားလည်း ရပါ့မလား မမ တွေးပူကြောက်နေတာ”
“ခုတော့ မမ ဆေးမစားတော့ဘူး
“ဟားဟားဟား””ရယ်ပါနဲ့ ဟွန့် ရှင်လေးက
မိန်းမယူသွားရင် ကျုပ်က အသည်းကွဲရအူး မယ်”
”မမရယ် ရင်ထဲက မေတ္တာ အမြဲ ရှိနေဖို့ ပါ”
“မမ ကျနော်နဲပဲ တစ်ညလုံးအိပ်တော့နော်”
“ဖြစ်ပါ့မလား. တော်ကြာ ဟိုလူက အချိုသတ် ၂ယောက်လုံးသတ်နေမှဖြင့်”
“ချစ်တာပေါ့ မောင်ရယ် ”
“ဒါဆို ကိုကြီး အချိုသတ်တယ်ဆိုလည်း ၂ယောက် အတူသေခံနိုင်တယ်ပေါ့” “အင်းပါရှင်လေးရယ် ရှင်နဲ့အတူအိပ်ပါ့မယ် “ချစ်လိုက်တာ မမရယ်”မမ နှုတ်ခမ်းလေး စုပ်ပေး အင်္ကျီလေး လှန် နို့ လေးတွေခြေ မမကလည်း ကျနော့်လီးလေး ဆွပေးနေတယ်။
မမ ထမီကို ချွတ် အဖုတ်လေး ကိုင်တော့ အရည်လေး စို့နေပြီ ။ ကျနော်လည်း မမပေါ် တက်မှောက် မမက လီးလေးကိုင် အဖုတ်လေးတေ့ ကျနော်လည်း ထိုးသွင်း လိုက်တယ်”
“အင်းး အားး” “အင့် အင့် အင့်”
“အာ့ အာ့” “ဟွင့် ကြမ်းထျာ ဖြေးဖြေးလိုး” '
“အင့် အင့် အင့်” “အမလေး အားး'”
” အင့် ” “အမလေး အားအား ၊
အို အရည်တွေ ထည့်လိုက်တာ
၊ မောင်ရယ် ” မမ ထဲစိမ်ထည့်ပြီး မမပေါ် မှောက်ဖတ်ထားလိုင်တယ် ။
မမက လည်း ကျနော့်ကို အတင်းဖတ်ထားတယ် ။နှုတ်ခမ်းတွေစုပ် အတူစုပ်နေလိုက်တယ်” “မောင် မောလား” “မောတာပေါ့ မရဲ့ ” “ခ်ခ် လီးထုတ်တော့လေ ” “တရေးနိုးမှ ထက်လိုးတော့ ” ကျနော်လည်း မမ ပေါ်ကဆင်း မမကို ဖတ်ခွ အိပ်နေလိုက်တော့တယ် ။
၂နာရီထိုးလောက် တရေးနိုးတော့ မမ က ဘေးစောင် ကျနော်က ပတ်လတ်နှဲု့ ။ဘေး စောင်နေတဲ့မမ ထမီမပါ တင်ပဆုံကားကား ကြီးမြင်တော့ လီးက တောင်လာပြီး မမကို ဖတ်လိုက်တယ် ၊မမလည်း နိုးလာပြီး တင်လေးက အလိုက်သင့် ကပ်လာတယ် ကျနော်လည်း နို့ လေးတွေပေါ် လတ်ရောက် မမကလည်း ကျနော်လီးလေးကိုင် အဖုတ်ထဲတေ့ပေးတယ်။ နောင်ကနေ ပဲ ပုဇွန်ကွေး လိုးပေးနေပြီး ပြီးခါနီးမှ မမကို ပတ်လတ်လှန် စောင့်လိုးပြီးလိုက်တယ်။မနက်မိုးလင်းတော့ ကိုကြီးကကျနော့်တို့ ကို လာနှိုးရတယ် ။ မမကတော့ မျတ်နှာပူနေရှာတယ် ။
ထမင်းကြော်တွေ လဘက်ရည်တွေလာချပြီး မီးဖိုချောင်ထဲ သွားနေတယ်။ ကျနော်တို့ လည်း ရုံးသွား ပုံမှန်လုပ် ညနေကြ ကျနော်က အဆောင်ပြန် အ၀တ်အိပ်ယူနေတယ် ။ကိုကြီးက အရင်ပြန်နှင့် ။ မမစန်းကတော့ သူယောက်ျား ကို ကျနော် မလားတော့ မမေး ။
ကိုကြီးက သူ့ မိန်းမ အနေထားသိပုံ ရလို့ နေမှာ အဆောင်မှာ အ၀တ်အိပ် ၀င်ယူ နေတယ် ငါ အိမ်မှာနေတော့ ပြောလိုက်တယ်။ ကျနော်လည်း မမစန်းကို တစ်ကယ်ချစ်တာ လား ကာမ ဆန္ဒကြောင့်လား စွဲလန်းတာတော့ အမှန် ။ တစ်ရက်နှစ်ရက်တော့ ၃ယောင်သား မျတ်နှာချင်းဆိုင် စကား မပြောဖြစ်ကြ ။ အထူးသဖြင့် မမနဲ့ ကိုကြီး စကားနည်းသွားကြတယ် ။
ဟုတ်တော့လည်း ဟုတ်တယ် နားလည်ရ ခတ်ခတ်ကြီး။ ညနေတိုင်းကိုကြီးက သောက်လာတယ် ၊ ထမင်းတော့ အတူစားကြတယ် စကားတွေ သိပ်မပြောဖြစ်ကြ။ မမက အိမ်အလုပ်ပြီး ကျနော် လာအိပ်တယ်။ ဒီလိုနဲ့ မမ ကိုဝန် ၃ လ ရလာတော့ ကိုကြီးလည်း အရက်ဖြတ်လိုက်ပြီ ၊ မမကိုလည်း ဂရုစိုက်လာတယ် ။ ကျနော်က အိမ်မှု့ကိစ္စအကုန်တာဝန်ယူလိုက်တယ်။ မမကို ဘာမှမလုပ်ခိုင်းတော့ ။ တစ်ခါတလေ စကားဝိုင်းမှာ ၃ ယောင်သား စနောက်နေကြသေး ။
“ငါ့မိန်းမ အရမ်းကံကောင်းတယ် လင်၂ ယောက် ဂရုစိုက်တာ ခံရတယ် ” “ရှင်တို့ လည်း ဘယ်လိုရေစက်ကြောင့် ဒီလို နားလည် မေတ္တာကြီးနေမှန်းမသိဘူး” “မမက ကံကောင်းတာနော်” “ညီဇော်ဇော် မင်းက ၀ဋ်ခံနေရသလိုပဲ” “အလိုလည်း မဟုတ်ပါဘူး အကိုကြီးရာ ကျနော် တို့ က မိသားစုတွေပဲလေ ” “ငါရုံးက ကောင်မလေးတွေ စည်းရုံး မင်းအနားကပ်ခိုင်းတယ် ။
မင်းက လုံးဝ စိတ်မ၀င်စား”မမ မှ မမဖြစ်နေတာလေ”
“မမက ကိုယ်ဝန်နဲ့လေ သူစိတ်ဆင်းရဲရင် ကလေးအတွက် မကောင်းဘူး တကယ်လည်း ရုံးကကောင်မလေးတွေ စိတ်မ၀င်စားလို့ ပါ” “အောင်မယ် နင်က ကလေးအဖေဖြစ်တော့ မှာနော်
“မစန်းရယ် မပြောပါနဲ့ ”
“သူ့ ကို တမင်စတာပါ ”
“တစ်ယောက်မေတ္တာ တစ်ယောက် နားလည်ပြီး ဒီမိသားစု ထာဝရပျော်ရွှင်ဖို့ မောင်လေး မင်းကို မမ ညီမနဲ့ပေးစားမယ်” ဒီလိုနဲ့မမစန်းကိုယ်ဝန်၆လ ရတော့ သူညီမ သင်းသင်းနွယ်နဲ့ ဇော်ဇော်ကို လတ်ထပ်ပေးလိုက်တယ် ။
နားလည်မှု့အပြည့်နဲ့ မိသားနှစ်စု တစ်အိမ်ထဲ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သိုက်သိုက်ဝန်း ၀န်း နေထိုင်သွားခဲ့ကြလေပြီ ။